Trafikana zava-mahadomelina – Maorisy: tovovavy gasy mpianatra tratra nitondra «héroïne» | NewsMada
Trafikana zava-mahadomelina – Maorisy: tovovavy gasy mpianatra tratra nitondra «héroïne»
Tovovavy malagasy iray, 23 taona, no tratra tany Maorisy, tao amin’ny seranam-piaramanidina Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport (SSRIA), nitondra « héroïne » milanja 216 grama, ny alahady maraina teo.
Avy aty Antananarivo io tovovavy io, nampiahiahy ny polisin’ny Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) any ka nanaovana fisavana. Tratra tany amin’ny fivaviany ireo zava-madomelina nafenina ireo. Mbola nahitana “carte mémoire” tany aminy ka tamin’ny alalan’io ny nisamborana mpamily taxi iray, 51 taona, efa niandry azy. Nosamborina izy mianaka ireo. Nosavaina ihany koa ny tranon’ilay tovovavy any an-toerana, saingy tsy nahitana na inona na inona. Notanana am-ponja avy hatrany izy ireo, ary mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika ny olona saika handray ireo zava-mahadomelina.
Efa faninefany nahatrarana vehivavy malagasy nitondra “heroine” izao ka nafenina tany anaty fivaviana. Mihazo an’i Maorisy hatrany ireo vehivavy ireo, ary mbola migadra any an-toerana hatramin’izao. Misy ihany koa ny lehilahy tratra, nitelina ireo zava-mahadomelina indray ireo. Amin’ny endrika isan-karazany ny isehoan’ny fanondranana zava-mahadomelina miala eny Ivato, mankany Maorisy. Any an-toerana hatrany vao tratra ireo Malagasy. Tsy misy fitaovana ahafahana mitily ny anaty fivaviana angamba ny eny Ivato.
140 kg sarona teto
Araka ny fanazavana, anisan’ny lalana andalovan’ny zava-mahadomelina mahery vaika eto amintsika, ary efa nisy 140 kg sarona, ny volana jona teo, niaraka tamina olona sivy, nahitana teratany afrikanina. Mitentina 300 000 Ar ka hatramin’ny 400 000 Ar ny grama amin’ireo karazana zava-mahadomelina mahery vaika ireo. Anisan’ny trafika lehibe indrindra tratra taty amintsika ity tamin’ny volana jona ity. Ny any Maorisy kosa anefa, efa ho isaky ny mihetsika, ahatrarana Malagasy hatrany. Hatramin’izao, tsy mbola nisy fanazavana mikasika ny tohin’ny fitsarana sy ny mety ho niavian’ireo zava-mahadomelina ireo. Mbola nisy ny olona nokarohina tany Toamasina, saingy tsy fantatra na tratra na tsia. Matetika, maty momoka na fanahy iniana totofana ny raharaha ary mangina ho azy tsy re intsony avy eo. Afaka ny olona voasambotra aorian’izay.